40 အဘို့ရလဒ် batman
Batman သူ့ရဲ့ပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုရဟတ်ယာဉ်ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတားအဆီးမောင်းဖို့ပဲ, ရဟတ်ယာဉ်မောင်းဖို့အားကိုး။ သငျသညျကျွမ်းကျင်စွာထိန်းချုပ်ရဟတ်ယာဉ် Batman ကိုကူညီ, W သော့တစ်ဦး, S, D ကိုကိုအသုံးပြုပါ။
သင့်ရဲ့စက်ဘီးပေါ် Lego မှ Batman အဖြစ် Gotham ပတ်ပတ်လည်ပြေးပြိုင်ပွဲ! မှတ်ဝင်ငွေနဲ့အလင်းရောက်ရှိရန်ရရှိနိုင်ရန်အိမ်ခေါင်မိုးကိုဖြတ်ပြီးသင့်ရဲ့လမ်းငုပ်ဖို့အမြို့ဖြတ်ပြီးလင်းနို့-ဒင်္ဂါးပြားကိုစုဆောင်းပါ။
ဒါဟာ Batman သင်၏ရန်သူ၏ဘဝအသက်တာ၌ဖြစ်ပြီးသင်သူလိုက်ဖမ်းရဲ့ကားကိုပေါကျကှဲမှရိုက်ကူးနိုင်အောင်, အခြားလမ်းကြောင်းမှတစ်ဘက်ခြမ်းကနေကခုန်ဖို့အအေး, ပြပွဲသွက်လက်လွတ်ကိုကူညီကြလိမ့်မည်ပုံရသည်။
Batman gotham လမ်းများပေါ်တွင်ဂိမ်းသတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်
အ Batmobile တက်မီးနှင့် Gotham လမ်းတွေအတွက်မြို့ပြန်ယူပါ! Gotham ၏လမ်းများလူရမ်းကားများနှင့်ရာဇဝတ်သားနှင့်အတူဝိုင်းပြီးလျှင်ကြသည်။ ရန်သူကားများနှင့်ဝေဟင်မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များဆင်းကိုလိုက်ရှာဖို့စမ်းသပ်လက်နက်များ Batman ရဲ့လက်နက်ကိုသုံးပါ။ ဗီလိန်သတိနှင့်ကြဉ်ရှောင်! Batman တစ်ဦးအပေါ်ဆင်နွှဲနေသောဖြစ်ပါတယ်
Batman ဂိမ်း stunts
မှောင်မိုက် Knight Batman စီးနှင့်အဆင့်ပြီးမြောက်ရန် position နဲ့ဆက်ဆံလုပ်ဆောင်။ သင့်ရဲ့တာဝန်ပေးရှေ့လှန်လုပ်နေတာခြင်းအားဖြင့် game.Unlock အခြား position နဲ့ဆက်ဆံ၏အောက်ခြေမျက်နှာပြင်မှာအလုပ်တခုကို, backflip နှင့်အခြား position နဲ့ဆက်ဆံစစ်ဆေးပါ။ သငျသညျရှင်သန်ဘဝတွေကိုကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။
တစ်ဖက်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်အောင်မြင်ခြင်းရန်သင့်လမ်းလာကြတယ်။ combo ရွေ့လျား, အမြန်တုံ့ပြန်မှုနှင့် over-the-ပခုံးကင်မရာကိုထောင့်ဒီဂိမ်းပျော်စရာနှင့်လုံးဝထူးခြားသောပါစေ။
motobike စွန့်စားမှုအပေါ် Batman, လမ်းပေါ်မှာရှိသမျှအတားအဆီးကိုကျော်လွှား, ရမှတ်တိုးမြှင့်ဖို့လမ်းပေါ်တွင် icon ကိုရ။ ဒီ motobike မောင်းထုတ်ရန် Batman အားလုံး levels.Use မြှား key ကိုရှောက်သွားကိုကူညီ ကျေးဇူးပြု.
Dark Knight မြင်းစီးသူရဲကို
Batman ကောင်းတစ်ဦးကိုအကြောင်းမရှိအဘို့အထပြန်! အသစ်တစ်ခုကိုအကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင်, Bane အပေါ်ရှစ်နှစ်, Gotham ရဲ့အကောင်းဆုံးသော overwhelms ကို၎င်း, Dark Knight သူ့ကိုရန်သူ branded သောမြို့ကာကွယ်ပေးရန် resurfaces ။ ရန်သူတင့်ကားများနှင့်ကွန်တိန်နာအတွက်ခရီးသွားလာကြသည်။ ဖျက်ဆီး
Batman3- gotham ကိုကယ်တင်
ဒါဟာဤဆိုးသောလူကြမ်းရပ်တန့်အလွန်စွယ်စုံဖြစ်ပြီးကိုယ့်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအရပ်တွင်ပေါ်ထွန်းသော Joker ဆန့်ကျင်လူကိုလင်းနို့ရိုက်ကူးဖို့မြို့၏အကူအညီနှင့်အတူ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများရပ်တန့်နိုင် Joker barbarizando Gotham City နှင့်သာ Batman ကြောင်းပုံရသည်
Batman - ထိုသူရဲမြင်းစီးသူရဲကို
Batman နှင့်အတူတစ်ဦးကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စွန့်စားမှု - အ Knight ဟာ Rider ။ သင့်ရဲ့စက်ဘီးကို Select လုပ်ပါ, အတားအဆီးကိုဖြတ်ကူး, အချက်များကိုဝင်ငွေမှ Batman ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းပါ။ သင့်ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်စတိုးဆိုင်မှာသင့်ရဲ့စက်ဘီးဝယ်ပါ။ န့်အသတ်ပျော်စရာနှင့်အတူဖြတ်ကျော်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအဆင့်ဆင့်!
မှတ်ရရအသေ city.Collect ဒင်္ဂါးပြားရောက်ရှိရန် Batman စီး။ အပိုမှတ်တိုင်းလှန်ဘို့ဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။
ဂေါ် grodd ၏လက်စားချေ
လူကိုလင်းနို့နှင့်အတူဤစွန့်စားမှု၏စဉ်းစားပါ။ Batma ဆိုးကို Gorilla Grodd နှင့်အန္တရာယ်များကိုရပ်တန့်ရပေမည်။ ဗုံးနှင့် BATM ၏ညှနျကွားထဲမှာတ္ထုပစ်လိုက်စဉ်သူသည်ဤအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ကားအပြေးပါတယ်။ အရာဝတ္ထုနေမှုကိုအာရုံလွှဲဖို့အမြန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးတင်ပါးနှင့် pa ရှိသည်ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်
Batman Gotham City ကို၏လမ်းများအတွက်ဒုက္ခ၌ရှိ၏နှင့်သူ၏လမ်းအပေါ်သူ့ကိုလမ်းပြသင့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်။
Batman gotham မြို့စွန်ပလွံ
, ဤနေရာသို့သွားရန် Glide နှင့် platformed ဒီမရပ်မနား Arcade အတွက် Gotham City ကို၏မိုင်ပြီးနောက်မိုင်အားဖြင့်တွန်း။
Batman မိမိအသစ်ကို Bat-Truck ကားကိုစမ်းသပ်ကိုကူညီပါ။ ပိုပြီးရမှတ်အဘို့, အာကာသကောင်းကင်၌လင်းနို့စုဆောင်းနှင့်သင်၏တိုးတက်မှုတက် Top-ရန်။
Batman အွန်လိုင်းဂိမ်း flash ။ A ကောင်းဆုံးတယောက်ဒါ gamebuss.com ပေါ်မှာ right ဒီမှာစမ်း!
သင်သည်သင်၏ကျယ်ပြန့်ချောင်းကိုပုံတပ်မတော်မှာထား၏အဖြစ်မည်သည့်ယူနစ်၏ထိန်းချုပ်မှုကိုယူ! - ကျနော်တို့ချစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဂိမ်းတစ်ခုလုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့, ဤကျနော်တို့ရတယ်အရာဖြစ်တယ်။ - အကယ်. သင်ဂိမ်းမိတ္တူပြီးစီးခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် mode မှာသင့်ရဲ့ကြိမ် paste ။
ဘီးနှစ်ဘီးပေါ်တွင်စစ်မှန်တဲ့ချန်ပီယံသောသားရဲမှပြသပါ။ သင့်ရဲ့ရှေ့ပြေး Wolverine နှင့်ဤအငြင်းပွားမှု hurdler ၌မိမိတို့အများစုကြောက်မက်ဘွယ်သောရန်သူကိုအနိုင်ရမှအမျိုးမျိုးသောလမ်းကြောင်းသင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုရွေးချယ်ပါ။
ဂိုဏ်း - အကြီးအကဲများရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါ
Vinnie မိမိအခြမ်း-မိတ်ဖက် Shorty မှသူ့ကိုစောင့်ရှောက်မြို့ပြဂိုဏ်းဆန့်ကျင်ထ Taskbar မှာအရင်ကမရှိသေးတဲ့, အသေခံခါနီးအပေါ်မိမိကိုမိမိတွေ့။
Mario ကမ်းခြေ moto
နှင့်အတူဤအံ့သြဖွယ်ကမ်းခြေခရီးမှ Mario ကိုကူညီပါမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်
အဟယ်လိုအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နှင့်သင်တို့၏ဝတ်စုံပေါ်တွင်တင်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကြောက်စရာဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်သတိရပါ။ သို့မဟုတ်သင်သူတို့အားဝိညာဉ်ကိုသွားစေရန်သင့်ရဲ့ကျက်သရေကိုသုံးနိုင်အောင်နည်းနည်းချစ်စရာဖြစ်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ, ကသငျသညျအထိပါပဲ။ ဤကွီးစှာသောလုပ်ကြည့် ယူ.
asgard ၏ကာကွယ်ရေး Thor